U-HPA umemezela i-2019 Engineering Excellence Award Winners - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-HPA ibika i-2019 Engineering Excellence Award Winners
I-2018 Hollywood Professional Association Awards Imikhosi ngoLwesine, Novemba 15, 2018, eLos Angeles, eCalifornia. (Isithombe sikaRyan Miller / Capture Imaging)
I-HPA ibika i-2019 Engineering Excellence Award Winners
The 2018 Hollywood Imiklomelo ye-Professional Association Awards ngoLwesine, ngoNovemba 15, 2018, ku- e-Los Angeles, California. (Isithombe sikaRyan Miller / Capture Imaging)
The Hollywood Ikomidi le-Professional Association (HPA) le-Award liye lamemezela abawine umklomelo we-2019 HPA Engineering Excellence. Abanqobile bakhethwa ngephaneli lokubheka i-ribbon ngemuva kweseshini IMAX ngoJuni 22. I-Honors izonikezwa ngoNovemba 21 ku-14th i-HPA Award gala ngonyaka we-Skirball Cultural Centre ku e-Los Angeles.
Imiklomelo ye-HPA yasungulwa ku-2005 ukuqaphela ubuciko bokudala kanye nemisha embonini yomculi wezobuchwepheshe. Udumo olufisayo, umklomelo we-Engineering Excellence Award uhlinzeka ngobuciko obuhle obubuchwepheshe nobuhlakani emithonjeni, ukukhiqizwa kokuqukethwe, ukuqedela, ukusabalalisa kanye nokugcinwa kwe-archive.
Sihlalo we-HPA Awards Engineering Committee uJoachim Zell uthe, "Unyaka ngamunye, kuyinjabulo enkulu nelungelo lokubona umsebenzi omusha ophuthumayo embonini yethu. Njengoba sibheka inani lokufakiwe, okuyinto enkulu kakhulu kunazo zonke, kukhona injabulo yangempela emphakathini wethu ukunyusa amandla ethu ezingeni elilandelayo. Kwakuwumncintiswano oseduze futhi usikhombisa ukuthi ikusasa lihlelwa ukuhlakanipha esikubonayo kumiklomelo ye-Engineering Excellence. Siyakuhalalisela kulabo abawinile, nabo bonke ababengenayo, ngomsebenzi othakazelisayo nophefumulayo. "
Abawina umklomelo we-2019 HPA we-Engineering Excellence yi:
I-Adobe - Okuqukethwe-Okuqaphelayo Gcwalisa Ividiyo ku-Adobe Ngemuva kwe-Effects
Okuqukethwe-Qaphela Qedela ividiyo, imboni yokuqala, isebenzisa ukuhlelwa kokusebenza okuhlakaniphile ukukhipha ngokuzenzakalelayo izinto ezingafuneki njengezimpawu zokuqhafaza noma izimpawu eziphazamisayo kusuka kuvidiyo. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokugeleza kokukhanya, Okuqukethwe-Qaphela Ukugcwalisa izingqikithi zokufakela phambili ngaphambi, eduze, noma ngemuva kwezinto bese ugcwalisa indawo ngokuzenzekelayo kubonakale sengathi into ayengekho lapho.
I-Epic Games - Unreal Engine 4
I-Unreal Engine iyinhlangano yesikhulumi sesikhathi sokubukwa kwesimo sangempela esingaguquguquki futhi esingahlelekile esenza izithombe, ukumbumbuluzwa, ukuthunjwa kokusebenza kanye nama-photorealistic renderers ekuvinjisweni okungakaze kube khona. Abenzi befilimu, abasakazo kanye nokusebenzisa okungaphezulu ukusetshenziswa kwe-Unreal Engine ezindaweni zokuhlola ze-scout kanye nokusetha, ukuqagela okuphelele, ukufeza i-VFX yokugcina ngekhamera ekusetshenzisweni, ukuletha ukusakazwa kwangempela okuhlanganisiwe okubukhomayo, hlela izinhlamvu ze-CG nokunye ngesikhathi sangempela. I-Unreal Engine igxilisa ngokuphawulekayo ukudalwa kokuqukethwe nokukhiqizwa okungokoqobo, okwenza abadali bakwazi ukuguquguquka okukhulu nokukhululeka ukufeza imibono yabo.
I-Pixelworks - I-TrueCut Motion
I-TrueCut Motion iyithuluzi levidiyo ye-cinematic yokubukeka kokumiswa kokuhamba kahle. Ihambisana ne-Pixelworks 'iminyaka engu-20 yobuholi ekucubunguleni kwevidiyo, kanye ne-dataset yokunyakaza okuhamba phambili nokuhamba phambili. Isetshenziswe njengengxenye yenqubo yokudala, i-TrueCut Motion inikeza amandla abenzi befilimu ukuhlola ububanzi obuningi bokubonakala kokuhamba kunokuba kungenzeka ngaphambili.
I-Portrait Displays, Inc. ne-LG Electronics - I-Calman LUT Isekelwe Ngokuzenzekelayo Ukuhlanganiswa Ne-LG OLED TV
Amathelevishini e-OLED avame ukusetshenziswa kuwo Hollywood ukusetshenziselwa okuhlukahlukene okubandakanya njengokuqapha kokubuka amaklayenti, ukuqapha i-reference ye-SDR BT.709, kanye nomqapha we-QC wokunikezwa komthengi, kuhlanganise nokusakazwa, abezindaba be-optical kanye ne-OTT. Ukuze isetshenziswe kulezi zilungiselelo zomsebenzi, ukulinganiswa kombala okunembile kubalulekile. I-Portrait Ibonisa futhi i-LG Electronics ihlangane ukuze iqoqe i-1D ne-3D LUT ezingeni lehadi le-hardware Calman AutoCal kuma-2018 nakuma-TV e-LG OLED amasha.
Izinkulumo ezihloniphekile zanikezwa ku-Ambidio ye-Ambidio Looking Glass; Grass Valley, a Belden brand for Ukubamba Creative; ne-Netflix, Inc. ye-Photon.
Ngaphezu kokuhlonishwa kwekhono lobuchwepheshe, ama-HPA Awards azobona ubuhle emikhakheni yezinhlaka ze-12 kubandakanya ukufakwa kombala, ukuhlela, umsindo nokubukwa komphumela. Abamukeli Umklomelo Wabahluleli Wezobuciko kanye Neziqalo kanye noMklomelo Wokuphila Wesikhathi Esizayo uzokwaziswa emavikini azayo.
Amathikithi we-14th I-HPA Awards yonyaka izobe iyatholakala ukuze ithengwe kamuva kuleli hlobo. Ama-HPA Awards akwenziwe ngokusebenzisa ukuxhaswa ngokuphanayo kwe-Award Title Diamond Sponsor I-Blackmagic Design, UMsizi wePlatinum IMAX, namaLungu eSisekelo Avid, I-Co3, i-Deluxe, i-Dolby, i-EFILM, ne-Encore. Ukuze uthole amathuba okukhangisa noma uhlelo lokukhangisa, xhumana noJoyce Cataldo at [Email protected]. Ulwazi olungaphezulu mayelana neMiklomelo ye-HPA kanye ne- Hollywood I-Professional Association ingatholakala www.hpaonline.com.
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Avid Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia I-Cobalt Encoder Ukuhlela Ubunjiniyela Ubuchwepheshe bezobunjiniyela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor HPA hpa imiklomelo Ukuhlanganiswa i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Ott SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Umlingisi wevidiyo	2019-07-12
Ngaphambilini: Ukusakaza u-Veteran Engineering u-Alain Beauvais Ujoyina i-TAG ukusekela ukukhula okuqhubekayo
Olandelayo: Umsizi Wokukhiqiza Ividiyo